“(စစ်တပ်မှာ အကြီးအကဲတွေက) အာဏာက အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့လူ… – PVTV Myanmar
“(စစ်တပ်မှာ အကြီးအကဲတွေက) အာဏာက အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့လူ…
“(စစ်တပ်မှာ အကြီးအကဲတွေက) အာဏာက အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့လူဆိုရင် နှိပ်စက်တယ်။ ဥပဒေဆိုရင်လည်း ကိုယ်သုံးချင်သလို သုံးတယ်။ ကိုယ်ကြည်ဖြူတဲ့ကောင်ဆိုရင် ဥပဒေကနေလွတ်တယ်၊ မကြည်ဖြူတဲ့ကောင်ဆိုရင် တကယ့်အမြင့်ဆုံး (ပြစ်ဒဏ်တွေ) ပေးပစ်လိုက်တယ်။ ပုဒ်မ ၆၅ ဆိုရင် ကျတော်တို့ (တပ်မှာ) အမြဲခေါ်တာကတော့ သောက်မြင်ကပ်ပုဒ်မပေါ့၊ ကြည့်မရရင် အဲ့ဒီ ပုဒ်မ ၆၅ နဲ့ဆွဲလိုက်ရင်ကို ထောင် ၇ နှစ်ထိချလို့ရသလို ၃ နှစ်လည်း သွားကြတယ်။ သူတို့(စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ) လုပ်ချင်သလိုကို လုပ်နေကြတယ်”
စစ်ကောင်စီကို အာဏာဖီဆန်ခဲ့သူ (DSA-48) အမှတ် ၉၉ ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်၊ ဦးစီးအရာရှိ(ဒုတိယတန်း)
Like – 14K Share – 2158
Mahogany May says:
2021-05-10 at 4:16 PM
thank you! for fighting along with Myanmar people
ဗိုလ်မှူးဖြစ်ချင်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ တပ်မတော်တစ်ခု ပြည်သူအားလုံးအတွက် ဝိုင်းဝန်းဦးဆောင် တည်ဆောက်ပေးပါ။ 🙏
2021-05-10 at 4:29 PM
ဗိုလ်မှုးဟိန်းသော်ဦးသည် မိမိသမိုင်းကို ကောင်းစွာရေးခဲ့လေပြီ. တိုင်းပြည်အတွက် သားကောင်းရတနာ​ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါသည်.
ဂျာ ကြီး says:
စစ်သားတစ်ယောက် အနေနဲ့ရော လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ဗိုလ်မှူးရဲ့ လူသားဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားပါတယ်
2021-05-10 at 4:41 PM
အခုမှပဲ လူသားဆန်တဲ့ စစ်သားမြင်ဖူး​တော့တယ်။ ​လေးစားပါတယ်ရှင့်။
2021-05-10 at 4:50 PM
အားရတယ်ဗျာ ကိုဟိန်းသော်ဦး ဘေးကင်းပါစေ တိုက်တိုင်းအောင်ပါစေ တိုင်းပြည်ကို ဒီ့ထက်ပို အလုပ်ကျွေးပြုနိုင်တဲ့ သားကောင်းရတနာ ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ
နိုင်ငံ အတွက် စစ်သားကောင်း
မိဘ အတွက် ဂုဏ်ယူရသော သားကောင်း
လူပီသ ခြင်းကို ဘဝ နဲ့ရင်းပြတဲ့ ဖခင်ကောင်း
Min Sat Paing says:
ကြက်တေ ဝက်တေမွေးနေရတာတဲ့ အေးရော😁😁 စစ်သားပီသတဲ့လူ ခုမှ မြင်ဖူးတယ် စကားပြောတာကစ ဟိုမအလနဲ့ ကွာပါ့ကွာ
ဗိုလ်မှူးကို ကြာလေ ချစ်ခင်ကြည်ညိုလာလေပါပဲ
Saw Raymond Lynn says:
2021-05-10 at 4:57 PM
ပြည်သူချစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာ အသေအချာပါပဲ
ကိုယ်ရေးတဲ့သမိုင်း မရိုင်းဘဲ လှခဲ့လေပြီ
Saw Eh Ta says:
2021-05-10 at 4:59 PM
လေးစားထိုက်သော ခေါင်းဆောင်မျိုးဆိုတာ ဒါကို ပြောတာ 🙏🙏
ဗိုလ်မှူးရဲ့ ရင်ထဲကလာတဲ့ စကားတွေဆိုတာ အဆင့်အတန်းရှိမှန်း သိသာပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးလို အရာရှိမျိုး တရားသော ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအတွက် အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ဘေးဘယာကင်းဝေးပါစေ။ ဗိုလ်မှူးရဲ့ မိသားစုတွေလည်း ကျန်းမာကြပါစေ။
Eimyat Naing says:
2021-05-10 at 5:00 PM
တပ်ထဲမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မရနိုင်တဲ့အရာပဲ။ ဇာတ်တူသား လည်းစားကြတာပဲ
2021-05-10 at 5:01 PM
စစ္တပ္ရဲ႕ ဥပေဒ ဆိုတာ ခ်ီးဥပေဒ…သူတို႔လက္သုံးစကားရွိတယ္…
”လူကို မုန္းရင္၊မူကိုသုံး” တဲ့…
YE N. Kyaw says:
2021-05-10 at 5:04 PM
ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မ​တော်သားဆိုတာ ဗိုလ်မှုးလိုလူမျိုးပါ။
2021-05-10 at 5:10 PM
ဗိုလ်မှူးကတော့ အမှန်တွေပြောပြီ ဒဲ့ကစ်တာပဲ😁
Min Kaung Khant says:
2021-05-10 at 5:14 PM
လေးစားပါတယ် ဗိုလ်မှူး နောင်တစ်ချိန် တိုင်းပြည်ကို တကယ်ကာကွယ်မဲ့ စစ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးရင် ဗိုလ်မှူးလိုလူမျိုးတွေ ဦးဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်🙏❤️
ဗိုလ္မွူးရဲ့ ရင္ထဲကလာတဲ့ စကားေတြကအဆင့္အတန္းျျမင့္ပီးရိုးသားသူဆိုတာ အေျပာအဆိုကေန ျမင္ေနရပါတယ္။ ဗိုလ္မွူးလို အရာရွိမ်ိဳးအမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။GZမ်ားနဲ႔အတူဗိုလ္မွဴးေဘးဘယာကင္းေဝးပါေစ။ မိသားစုေတြလည္း က်န္းမာၾကပါေစ။ ေန႔စဥ္ေမတၱာပို႔ေပးလ်က္ပါ။
2021-05-10 at 5:30 PM
We need couple of colonels and major generals more.
2021-05-10 at 5:32 PM
အခုလက်ရှိမှာ တနိူင်ငံလုံးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ စစ်တပ်က. အင်အားမလုံလောက်တော့ဘူး…..ပြည်သူဖက်ကလဲ တုတ်ဓားနဲ့တော့ မဖြစ်နိူင်ဘူး…….
Bala Mg says:
2021-05-10 at 5:37 PM
အရမ်း ငါ လေးစားတယ်
December Jean says:
လေးစားပါတယ်ဗိုလ်မူးရယ်။ ဗိုလိမူးလိုလူတွေ အများကြီးရှိရင် စစ်တိုက်စရာမလိုတော့ဘူး
Respect For the Truth Words. Salute as Future Federal Millenary Leaders.
Umyo Oo says:
Respect Maj HTO
The uprising must succeed.
ယမင္း ေရႊစင္ says:
2021-05-10 at 5:46 PM
လေးစားပါတယ် ဗိုလ်မှူး ရှင့်
လေးစားပါတယ်။ဗိုလ်မူး ကျန်းမာလို့ ဘေးရန်ကင်းပါစေ ။
Zaw Zaw Tun says:
2021-05-10 at 6:35 PM
G2 နောက်အဆင့်တွေဆို ဒုတပ်ရင်းမှူး၊တပ်ရင်းမှူး ရောက်မှာ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်မှူးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ အမှန်နေတတ်တဲ့ အကျင့်က ဗိုလ်မှူးပြောသလို အထက်လူကြီးက ထောက်ခံပေးဖို့ မလွယ်လို့ တပ်ရင်းမှူးအဆင့်ထက် ပိုဖို့မလွယ်ဖူး ကောင်းပါတယ် ဒီလိုထွက်ခဲ့တာ နောင် NUG အစိုးရ လက်ထက်ကြ ဗိုလ်မှူးလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ လူမျိုးက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းဟာ..ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦး ပါပဲလို့ နောင်အနာဂါတ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုပြောပြလို့ရပါပြီ…အရမ်းလေးစားပါတယ် ဗိုလ်မှူးရယ်..
2021-05-10 at 7:01 PM
ကြက်မွေး၊ဝက်မွေး၊ငါးမွေး၊နွားမွေး၊လယ်တွေသိမ်း စပါးတွေစိုက်၊ယာတွေသိမ်း ကြံတွေစိုက် နုံတွေစိုက် ၊ဘယ်သူတွေနဲ့စိုက် တပ်ထဲက အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများစိုက်ရ မှီခိုများလဲ ပါ၏။ အဲ့ကထွက်တဲ့ ပိုက်ဆံဘယ်ရောက်……..
ဘာပုံပေါက်နေမှန်းကိုမသိဘူး တော်တော်ကို ကြည့်ရ ဆိုးတယ်။
Thawng Mung says:
တပ်က ကြက်တွေ ဝတ်တွေမွေး ပြီးတော့ ဘာပုံပေါက်မှန်းကိုမသိတော့ဘူး 🤣🤣🤣
2021-05-10 at 7:54 PM
ဗိုလ်မှူး ဟိန်း​သော်ဦးကို ချစ်လိုက်တာ ငါ့အကိုကြီးသာဖြစ်လိုက်ပါ​တော့၊ ​ကျေးဇူးလည်းတင် ​လေးလည်း​လေးစားပါတယ် 🙏
2021-05-10 at 7:56 PM
အိုအိုး ဗိုလ်မှူးရယ် ဘာပုံစံပေါက်နေမှန်းကို မသိဘူး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
လေးစားပါတယ် CDM စစ်ဘက်ရဲ ဘက် မှ သူတော်ကောင်းအာဇာနည် များ…
အခု ၂၁ ရာစု မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့တပ်ကို ပြန်လဲ အသက်သွင်းဖို့ မိမိတို့ ၂၁ ရာစု မြန်မာ နိုင်ငံ သားများ၏ သမိုင်းပေးတာဝန်ဝန်ဖြစ်သည် 🙋
2021-05-10 at 8:49 PM
ဗိုလ်မူးကိုမြင်းမမြင်ဘူးသလိုမသိပါဘူးစစ်တပ်မှာနံမည်မကျော်တာကဘလည်းဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဟိန်းသော်ဦးလိုစသိထဲကမြင်ဘူးတာနောက်ပိုင်းမှာအကိုလို့ဘဲပြောမယ်နော် အကိုလက်ခံပေးတဲ့သူတွေကိုပိုလေးစားပြီး နောက်ပိုင်း အကိုလုပ်ပြပြောပြသင်ကြားတာတွေ ကို လေးစာပါတယ် ကျွန်တော်လည်း ပြည်ပကနေ ကိုအားရှိသလောက်လျူနေပါတယ် အခု ငွေဈေးကောင်းနေတာတောင် မိန်းမစီမပိုဘဲလျူတယ်ဗျာ အထက်မြန်မာပြည်သား အောက်မြန်မာပြည်သား ဆိုပြီး ခွဲခြားကြတာ ဒီစစ်‌ငနွားတွေကြောင့် ဆိုတာ သိလာရတယ် လေးစားလျက်ပါ ဗိုလ်မူး ပြည်သူ‌တွေရဲ့လက်ရှိ ဗိုလ်မူးပါဗျာ လေးစားပါတယ်
I do not know, I do not know, I do not know, I do not know, I do not know, I do not know, I do not know, I do not know, I do not know, I do not know.
2021-05-10 at 9:01 PM
အခုလို စိတ္ေကာင္းေလးေတြက ေနာက္ဘဝေတြအတြက္ ပါရမီျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ အမ်ားရဲ႕ အားကိုးရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစပါတယ္ အကိုေရ
Kohan Oo says:
2021-05-10 at 9:11 PM
မှန်တယ်. ဗိုလ်မှူးက တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှာ ညံ့ဖျင်းနေတဲ့အချက်တွေကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ တည့်တည့်ကြီး ထောက်ပြသွားနိုင်တာကို ကြည့်ရင် စိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီး အရမ်းတော်တဲ့ ဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်ဆိုတာ ချက်ချင်း ခန့်မှန်းလို့ရတယ်. Bravo!!
2021-05-10 at 9:45 PM
မိဘအတွက် ပြည်သူ့အတွက် သားကောင်းပါ။လေးစား ဦးညွှတ်လျက်ပါ။
2021-05-10 at 9:50 PM
Basically , it isavery corrupt , unethical , immoral , zero code of conduct institution, finally uncovered its real characteristics in Feb 2021, after lying and dividing the public for 70 years. They are not human , lower than even animals .
2021-05-10 at 9:55 PM
မိဘ အတွက် ဂုဏ်ယူရသော သားကောင်းဗိုလ်မူးကိုအလေးပြုပါတယ်
ကိုဟိန်းသော်ဦးရေ ကျွန်တော်ယုံကြည်အားကိုးစွာမေးခွန်းတစ်ခုလောက်ပါဗျာ ခင်ဗျာ တေဇ လား?
ဓူဝံ ၾကယ္ says:
ျကက္/ဝက္ ေမြးျမဴေရး စစ္တပ္
2021-05-10 at 10:46 PM
လေးစားအားကျမိတယ် ဗိုလ်မှူးရယ်…ခိုင်မာတဲ့ ရပ်တည်ချက် မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ် တည်ကြည်ပွင့်လင်းတဲ့ အပြောအဆိုတွေ…လူလိမ်မာသား ယဥ်ပါး၏…ဆိုသောစကား ကိုနားထောင်ရင်း သတိယမိတယ်ဗျ
Lilly Ngun Zaly says:
အမှန်တရား ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့တပ်မတော်သား ကိုလေးစားပါတယ်၊ သူပြောသွားတာတွေလည်း ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ရင်ထဲကလာတဲ့ စကား လို့ ခံစားမိပါတယ်
2021-05-11 at 12:14 PM
သူရဲ​ေကာင္​းဆိုတာ ​ေခတ္​ပ်က္​မွ ​ေပၚလာတတ္​တာမ်ိဳးပါ
နိုင္​ငံ့အတြက္​ ဒီလို ​ေယာက္​်ားပီသတဲ့ သူရဲ​ေကာင္​း​ေတြကို
ျပည္​သူတစ္​​ေယာက္​ အ​ေနနဲ႔ ​ေလးစားဦးၫြတ္​ပါတယ္​
မှန်တယ်. ဗိုလ်မှူးက တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှာ ညံ့ဖျင်းနေတဲ့အချက်တွေကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ တည့်တည့်ကြီး ထောက်ပြသွားနိုင်တာကို ကြည့်ရင် စိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီး အရမ်းတော်တဲ့ ဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်ဆိုတာ ချက်ချင်း ခန့်မှန်းလို့ရတယ်. လေးစားပါတယ် ဗိုလ်မူး
2021-05-12 at 7:33 AM
ဗိုလ်မှူးလို စိတ်ဓာတ်နဲ့ စစ်သားကောင်းတစ်ယောက် ပြည်သူနှင့်အတူ ပူးပေါင်းလာခြင်းက လုံးဝ အားတတ်စရာပါ
2021-05-14 at 12:00 PM